Freapp - Hubaal Data Waxaad ka iibsan kartaan xirmooyinka Somtel iyo SomNet. Hada kadib ...
Waxaad ka iibsan kartaan xirmooyinka Somtel iyo SomNet. Hada kadib uma baahnid in aad cid la hadashid ama qara...
Waxaad ka iibsan kartaan xirmooyinka Somtel iyo SomNet. Hada kadib uma baahnid in aad cid la hadashid ama qarash telefan ku bixisid si laguugu shubo xirmo Somtel ama SomNet hadii aad isticmaashaan Hubaal Data app. Sidoo kale ka waxaad ka heli doontaa Adeegyada EVC Plus, ANFAC iyo Artimet